Malunga nathi - iTspringwater Co., Ltd.
I-Tspringwater Co., Ltd. ibekwe kwisiXeko saseQuanzhu, kwiPhondo laseFujian, eliyifashoni yobuchwephesha bokuvelisa iimpahla kunye nokuthumela ngaphandle, kwaye ngaphezulu kweminyaka eli-10. Uyilo, uphuhliso, ukufumana kunye nokuvelisa, iimfuno zorhwebo kwihlabathi liphela, njengamazwe e-EU, i-USA, Canada, Australia ne-Asia. SIYAMUKELA iimpahla zesitokhwe zesiko le-OEM ngaphandle kwe-MOQ.
Sibonelela ngeempahla ezilukiweyo ezinje ngeempahla zokubhukuda, iimpahla zaselwandle, uyilo oludibeneyo, iimpahla zangaphantsi, iilokhwe zangaphantsi, ezemidlalo kwabasetyhini, amadoda nabantwana. Kananjalo sinokwenza iibhegi ezahlukeneyo ezinjengePakethe yokunyuka, iLunch Bag, ibhegi yekhompyuter.
Umzi mveliso wethu awusebenzisi oomatshini bokuthunga abaphambili kuphela kunye neenkqubo zobuchwephesha ukuvelisa iZambatho, kodwa uqeshe abasebenzi abanamava.Umzi mveliso unokwenza iimveliso ezingaphezu kwe-2000 zeekhampani enye ye-Day.Our inkampani yokubonelela ngempahla zemidlalo kumazwe angaphezu kwama-65 ngaphezulu kwe-4,500 abathengisi abathembekileyo. Asenzi nje kuphela inkonzo ye-ODM, kodwa nenkonzo ye-OEM.
Intlonipho kubathengi, ukuthembeka, iqela lokuqala
Umbono wenkampani: Yenza ezona mveliso zemidlalo zidumileyo kwihlabathi
Ifilosofi yeshishini lenkampani: ukuthembeka, intsebenziswano, imeko yokuphumelela, uphuhliso!
Isimo seNkampani: Ukukhuthaza, ukuSempilweni, ukuThemba, ukunyamezelana, Ukwabelana, ubunye, umbulelo.
Umsebenzi weNkampani: Yenza ixabiso kubathengi, uqonde amaphupha abasebenzi, uphumelele kwilizwe labo, kwaye wenze iinzame ezingapheliyo zokuzonwabisa kunye neentsapho zabo.